Khulisa i-Foot Traffic In-Store ne-Intanethi ngeFATWIN | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septhemba 20, 2013 NgoLwesihlanu, Septhemba 20, 2013 Douglas Karr
Ngibe nenjabulo yokuhlala phansi nomsunguli nethimba ku FATWIN izolo njengoba bethule i-beta yabo ku- Ingqungquthela yeM-Tech e-Indianapolis. UScott ungusihlanganisi futhi ungusihlalo omkhulu we CIK Amabhizinisi, isoftware yokumaketha nezinsizakalo ezilinganisiwe ebisiza izinkampani iminyaka eyishumi manje. I-CIK yethule iFATWIN ™, inkundla yezobuchwepheshe bokumaketha esiza amabhizinisi shayela iwebhu nethrafikhi yasesitolo ngokusebenzisa imidlalo, imincintiswano nokuhlengwa komklomelo.
Emkhakheni wanamuhla wokumaketha, amabhizinisi abhekene nenselelo yokwenza nokwenza iziphakamiso zokunyusa okugqugquzelwayo. Nge-FATWIN, sisebenzisa ngokushesha imidlalo yekhwalithi nemincintiswano ekhulisa ithrafikhi yezinyawo elinganisekayo noma ithrafikhi eku-inthanethi futhi ekugcineni, ukuguqulwa. UScott Hill, Co-Founder kanye noSihlalo oPhethe we-CIK Enterprises.
Isikrini se-Winner esinemikhombandlela yomklomelo nokuhlengwa okubonisiwe kanye nokunikezwa komkhiqizo.
Isikrini se-FATWIN Kiosk esinokungena ngemvume okukodwa nezaziso ezisobala zabaphumelele umklomelo.
Isikhangiso esiku-inthanethi esishayela othile emncintiswaneni we-intanethi noma esitolo esidayisa nge-kiosk.
Isikhangiso sendabuko sokuphrinta esiqhubela umuntu emncintiswaneni we-inthanethi noma esitolo esidayisa nge-kiosk.
Umncintiswano weFATWIN wokudlala ngemiklomelo obhalwe ngokusobala ngaphansi.
I-CIK ibisiza amabhizinisi ukushayela ukuhola ngokusebenzisa imidiya yendabuko kanye ne-inthanethi isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi futhi bathole izinkinga ezimbalwa ezinkulu FATWINUFATWIN ubeka ukuphumula:
Trust - Izivakashi eziyi-9% kuphela ezethemba ukuthi imincintiswano isebenza futhi imiklomelo inikezwa ngokweqiniso. Ukuhlanganiswa okusobala kwe-FATWIN online nokuhlanganiswa komphakathi kulungisa lokhu. Konke abawinile bathunyelwa esidlangalaleni ngesikhathi sangempela esitolo esidayisa abathengisi - nge-kiosk, naku-microsite yomncintiswano.
Ku-inthanethi naku-inthanethi - kunemincintiswano eminingi yokuphrinta neqondile yeposi. Futhi kunemincintiswano eminingi eku-inthanethi. Kodwa-ke, akubanga khona ipulatifomu ehlanganisa kokubili ukushayela kokubili ithrafikhi eku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi kubathengisi nakumabhizinisi. Ukuhlanganiswa kwekhiyoski kaFATWIN esitolo, izinsizakalo zokuphrinta, kanye ne-microsite bayashada futhi bashayele bobabili.
Isikhuthazo - izinkampani kaningi azinazo izinsiza zemiklomelo ekhangayo ngokwanele ukukhuthaza amathuba okuphendula. Imiklomelo yamachibi e-CIK ukuze ihehe ngendlela emangalisayo. Kukhona ngisho nama-jackpots aqhubekayo nensizakalo (okwamanje icishe ibe ngama- $ 40,000). Kuze kube manje, insizakalo inikeze ngaphezulu kwe- $ 3.7 million - hlola i- FATWIN iwebhusayithi yethikha ebukhoma.
ubuchwepheshe - Ngenkathi i-FATWIN ingumkhiqizo, iza neqembu lochwepheshe abakwaziyo ukuqhuba imincintiswano ehola umkhondo webhizinisi lakho. I-FATWIN isingatha zonke izici zomthetho nezokulawula zomncintiswano… usiza ukuhlanganisa imibuzo eholayo ukuze ufanelekele ukuhola futhi uthole imiphumela!
Ukuhola kuboniswa ngokusobala ngemininingwane yabo yokuqinisekisa yethimba lakho lokuthengisa ukuze libalandele.
I-FATWIN ibonisa yonke imithombo ebhekisayo yethrafikhi - kufaka phakathi indawo yokuthengisa.
FATWIN iheha abathengi ukuthi bonge imali, bazuze imiklomelo futhi babungazwe ngemidlalo esezingeni eliphakeme, enezimpawu zebhizinisi ezinikezela ngamaphromoshini akhuthazayo online nasezitolo. Amabhizinisi ayakwazi ukusebenzisa ipulatifomu ukuthola amakhasimende amasha, akhiqize imikhondo, futhi alandele imiphumela esheshayo nge-FATWIN analytical dashboard interface.